18 sanno jir Hindiya u dhashay oo garbaha ku jiida gaari culeyskiisu yahay 1.1 tonn - Hablaha Media Network
18 sanno jir Hindiya u dhashay oo garbaha ku jiida gaari culeyskiisu yahay 1.1 tonn
HMN:- Kani waa waqti cajiib ah isla markaana adduunka waxaa kusoo kordhay arrin ilqabad leh oo mucjiso ah. Wiil lagu naaneyso Steel Blades ayaana wuxuu laba gaari ku jiidayaa inta u dhexeysa labadiisa garbood isagoo isku keenaya labada lafood ee garbihiisa halkaasoo uu bir surayo ka dibna uu ku jiidayo labadaas gaari.
Abhishek Choubey wuxuu kasoo jeedaa magaalada Sagar ee gobolka Madhya Pradesh ee dalka India, wuxuuna haatan rajeynayaa inuu noqdo wiilka keliya ee adduunka sidaan sameyn kara isla markaana uu rikoor cusub u dhigo adduunka maalin ay noqotaba.
18 sanno jirkaan ayaa wuxuu jiiday gaari culeyskiisu yahay 1.1 tonne (1,100 Kilogram) weliba fogaan dhan 27.5 metres wuxuuna ku jiidayaa keliya birtaas yar ee la geliyey inta u dhexeysa labadiisa garbood… Waase keliya ka hor inta uusan isku deyin inuu jiido laba gaari hal waqti.
Wiilkaan ayaana wuxuu daaha ka qaaday inuu maalin kasta isticmaalo dhowr dersin oo buskud ah taasoo uu sheegay inay ka caawisay inuu xoog badan ku yeesho labada garbood dhexdooda wuxuuna sheegay inuu sidoo kale isticmaalo farsamooyin u gaar ah.
Wuxuuna haatan ku rajo weyn yahay in lagu daro rikoorkaan iyo mucjisadaan uu adduunka kusoo kordhiyey buugga The Guinness Book Of World Records. Hooyadiis Saroj Choubey ayaana daaha ka qaaday inay aaminsan tahay tayada wiilkeeda.
Halkaan hoose ayaad ka daawan kartaa muuqaalka mucjisada leh ee Abhishek Choubey, qaabka uu labada gaari u jiidayo iyo wareysi uu kaga hadlayo mucjisadiisa.